Nka na ụzụ Ntuziaka |
Igwe na -ejuputa mmiri
Igwe igwe na -ejuputa mmiri
Igwe na -ejuputa mmiri na -egbu egbu
Igwe na -eme ka mmiri jupụta iko
Obere obere karama mmiri PET
Igwe mmiri na -ejuputa mmiri nke Gallon 5
Igwe na -ejuputa ihe ọ Beụ Beụ
Igwe eji emeju mmiri Carbonated
Igwe ihe ọverageụ -ụ na-enweghị carbon
Igwe na -ejuputa ume ike
Ihe ọ Hotụ Hotụ na -ekpo ọkụ ihe ọiceụ Hotụ
PET karama ihe ọ juiceụ Juụ Line Line
Igwe na -eju mmanya mmanya
Igwe eji eme mmanya mmanya
Line Line Na -ejuputa Mmanụ
Line Flling Machine Line
Ahịrị igwe na -ejuputa mmanụ dị mkpa
Igwe na -ejuputa nri
Line Line nke na -eju mmanụ aeyụ
Igwe na -ejuputa ọgwụ
Igwe eji emeju mmiri nke 10ml
Igwe na -ejuputa sirop
Igwe na -eju mmanya
Mbadamba, Capsule na Mbadamba Ngwa Ngwa
Igwe eji emeju ihe ịchọ mma
Igwe mkpuchi ejuputa igwe mkpuchi
Igwe eji emeju karama ude
Nweta igwe ncha ntutu ncha ntutu
Igwe ntu ntu Polish
Igwe Na -ejuputa Chemical
Igwe Mmiri Liquid Na -emeju Mmiri
Automatic Hand Sanitizer Fill Machine Line
Igwe na -akpaghị aka Linear Capping Machine
Igwe akpaaka akpaka akpaka
Mpempe akwụkwọ mmado gburugburu
Ngwa igwe mmado kacha elu akụkụ HAP
Onye na -enyocha ihu na azụ akụkụ nwere usoro
Dozie ọnọdụ akwụkwọ mmado HDY Series
Ihe nkwụnye kwụ kwụ n'ahịrị HAW Series
Igwe nyocha ihe nhicha oyi
Igwe nyocha ihe na -ekpo ọkụ na -agbaze agbaze
Igwe igwe eji eme akwa
Igwe nkwakọ ngwaahịa mmiri
Mmiri ara ehi/ihe ọ /ụ /ụ/igwe na -akwakọba Liquid Sachet
Ihe nhicha akpa/ihendori akpa
Ngwakọta ngwongwo ntụ ntụ
Ngwakọta kọfị kọfị/mkpụrụ/granules
Tea akpa mbukota igwe
Ihe ọ Juụ Sụ Sachet na -ejuputa igwe
Gịnị bụ igwe nzuzo? Nhọrọ ole ka ị nwere maka ịgbakwunye ngwa nbipute n'ahịrị mbukota gị?
Kedu ihe bụ Coder? Ọtụtụ ndị ahịa jụrụ ajụjụ a mgbe ha nwetasịrị okwu nke igwe mmado. Koodu bụ ngwa nbipute kachasị mfe maka akara. Edemede a ga -ewebata gị ọtụtụ ndị na -ebi akwụkwọ bụ isi n'ahịrị mmepụta. 1, Ngwa coder/coding Igwe igwe kacha dị mfe bụ co ...
Kedu ihe na -emetụta ndụ ọrụ nke igwe?
1. Nke mbụ: Ogo igwe. Ndị nrụpụta dị iche iche na ụdị igwe dị iche iche nwere ike iji ngwa elektrọnik nke ụdị na nhazi dị iche iche. Igwe ahụ nwere ọtụtụ usoro, yana ngwa ọ bụla nwere ngwa dị iche iche jikọtara. Nke dị elu karịa ...
kwuru okwu ma kwụsie ike
site na nchịkwa na 19-12-16
Ọ dị iche n'etiti ụdị eriri rola na ụdị ọnọdụ edoziri maka ịdebanye karama okirikiri Ọtụtụ oge, igwe na-eji igwe okwu na arụrụ arụ na-agbagha ndị na-azụ ahịa. Ha nwere ike kpọọ karama gburugburu. Kedu ndịiche ha bụ? Kedu ka anyị ga -esi họrọ igwe dabara adaba? Ka anyị malite ...
Nnukwu igwe (Shanghai) Co., Ltd.